Nhau - Mazororo eNyika muna Kubvumbi 2022
Mazororo eNyika muna Kubvumbi 2022
Zuva reApril Fool(Zuva raApril Fool kana Zuva Remapenzi Ese) rinozivikanwawo seWan Fool's Day, Humor Day, Zuva reKubvumbi Fool.Mutambo uyu ndiApril 1 pakarenda yaGregory.Mutambo wakakurumbira wevanhu kuMadokero kubva muzana ramakore re19, uye hauna kucherechedzwa semutambo wepamutemo chero nyika.
Vietnam - Hung King Mutambo
Hung King Festival mutambo muVietnam, unoitwa gore rega rega kubva ku8th kusvika ku11th zuva remwedzi wechitatu wemwedzi wekurangarira Hung King kana Hung King.VeVietnamese vachiri kuisa kukosha kukuru kumutambo uyu.Kukosha kwemutambo uyu kwakafanana nekwevanhu vekuChina vanonamata Yellow Emperor.Zvinonzi hurumende yeVietnam ichanyorera mutambo uyu seUnited Nations World Heritage Site.
Mabasa: Vanhu vachagadzira marudzi maviri aya ezvokudya (raundi redenderedzwa rinonzi Banh giay, sikweya rinonzi Banh chung – zongzi) (square zongzi rinonziwo “keke repasi”), kunamata madzitateguru, kuratidza kuzvipira kwevana, uye tsika yekunwa mvura nekufunga kwetsime.
Southeast Asia - Songkran Mutambo
Songkran Mutambo, unozivikanwawo seSongkran Mutambo, mutambo wechinyakare muThailand, Laos, Dai dzinza muChina, uye Cambodia.Mutambo wemazuva matatu unoitwa gore negore kubva musi wa13 Kubvumbi kusvika 15 wekarenda yaGregory.Songkran inonzi Songkran nekuti vagari vekuSoutheast Asia vanotenda kuti kana zuva rapinda muimba yekutanga yezodhiac, maAries, zuva iroro rinomiririra kutanga kwegore idzva.
Mabasa: Zviitiko zvikuru zvemutambo uyu zvinosanganisira mamongi kuita mabasa akanaka, kugeza nekuchenesa, vanhu vachimwaya mvura vachiropafadza, kunamata vakuru, kusunungura mhuka, kuimba nekutamba mitambo.
Bangladesh - gore idzva
Mhemberero yeGore Idzva rechiBengali, inowanzozivikanwa sePoila Baisakh, ndiro zuva rekutanga rekarenda yeBangladeshi uye ndiro karenda repamutemo reBangladesh.Musi waKubvumbi 14, Bangladesh inopemberera mutambo uyu, uye muna Kubvumbi 14/15, Bengalis vanopemberera mutambo uyu zvisinei nechitendero mumatunhu eIndia eWest Bengal, Tripura neAssam.
Mabasa: Vanhu vachapfeka zvipfeko zvitsva uye kuchinjana masiwiti uye mufaro neshamwari nevavanoziva.Vechidiki vanobata tsoka dzevakuru vavo uye kutsvaga maropafadzo avo egore rinouya.Hama dzepedyo nevadiwa vanotumira zvipo uye makadhi ekukwazisa kune mumwe munhu.
Multinational - Chishanu chakanaka
Chishanu Chishanu izororo rechiKristu rekurangarira kurovererwa uye kufa kwaJesu, saka zororo racho rinonziwo Chishanu Chitsvene, Silent Friday, uye maCatholic anodana kuti Chishanu Chishanu.
Mabasa: Pamusoro peChirairo Chitsvene, minamato yemangwanani, nekunamata kwemanheru, mafambiro eChishanu Chakanaka anowanikwawo munharaunda dzechiKristu dzechiKatorike.
Isita, inozivikanwawo seZuva Rokumuka Kuvakafa, ndeimwe yemitambo yakakosha yechiKristu.Pakutanga raive zuva rimwechete nePaseka yemaJuda, asi kereke yakasarudza kusashandisa karenda remaJuda paKanzuru yekutanga yeNicaea muzana ramakore rechina, saka yakashandurwa kuita mwedzi wakakwana nguva yechirimo yega yega.Mushure meSvondo yekutanga.
Mazai eIsita: Panguva yemutambo, maererano netsika dzechivanhu, vanhu vanofashaidza mazai ndokuapenda dzvuku, izvo zvinomiririra ropa rinochema gwenzi uye mufaro pashure pokuberekwa kwamwarikadzi woupenyu.Vakuru nevana vanoungana mumapoka evatatu kana vashanu, vachitamba mitambo nemazai eIsita
Easter Bunny: Izvi zvinodaro nekuti ine simba rekubereka rakasimba, vanhu vanoiona semusiki wehupenyu hutsva.Mhuri dzakawanda dzinoisawo mazai eIsita pauswa hwebindu kuti vana vatambe mutambo wekutsvaga mazai eIsita.
Zuva reRusununguko reItaly ndiApril 25 gore rega rega, rinozivikanwawo seZuva reRusununguko reItaly, Anniversary yeItaly, Resistance Day, Anniversary.Kupemberera kupera kwehutongi hwefascist uye kupera kwekutorwa kweNazi muItaly.
Mabasa: Pazuva rimwe chetero, chikwata cheAerobatic cheItaly "Tricolor Arrows" chakapfapfaidza utsi hutsvuku, huchena uye hwegirini hunomiririra mavara emureza weItaly pamutambo wekurangarira muRoma.
Australia - Zuva reAnzac
Anzac Day, shanduro yekare ye "Australia New Zealand War Remembrance Day" kana "ANZAC Remembrance Day", inorangarira Hondo yeAnzac yakafira muHondo yeGallipoli musi waApril 25, 1915 panguva yeHondo Yenyika Yekutanga mazororo eruzhinji nemitambo yakakosha muAustralia neNew Zealand.
Mabasa: Vanhu vazhinji vanobva kumativi ese eAustralia vachaenda kuWar Memorial kunoisa maruva pazuva, uye vanhu vazhinji vachatenga ruva repoppy rekupfeka pachipfuva chavo.
Egypt - Zuva reSinai Rusununguko
Muna 1979, Egypt yakaita chibvumirano cherunyararo neIsrael.Pakasvika January 1980, Egypt yakanga yawanazve zvikamu zviviri muzvitatu zvenzvimbo yeSinai Peninsula maererano neEgypt-Israel Peace Treaty yakasainwa muna 1979;muna 1982, Egypt yakanga yawanazve chimwe chikamu muzvitatu cheSinai., Sinai vose vakadzokera kuEgipita.Kubva ipapo, Kubvumbi 25 gore rega rega rave Zuva reRusununguko reSinai Peninsula muEgypt.
Netherlands - Zuva raMambo
Zuva raMambo izororo repamutemo muHumambo hweNetherlands kupemberera mambo.Parizvino, Zuva raMambo rakarongwa muna Kubvumbi 27 gore rega rega kupemberera zuva rekuzvarwa kwaMambo William Alexander, mambo akakwira chigaro muna 2013. Kana iri Svondo, zororo richaitwa zuva rakapfuura.Iyi ndiyo Netherlands Mutambo mukuru.
Mabasa: Pazuva iri, vanhu vachaburitsa marudzi ese emidziyo yeorenji;mhuri kana shamwari dzichaungana kuti dzigovane keke yamambo kunamatira gore idzva;muHague, vanhu vatanga mhemberero dzinoshamisa kubva manheru eZuva raMambo;Paridhi yekuyangarara ichaitwa muHaarlem Square.
South Africa - Zuva reRusununguko
Zuva reSouth Africa Freedom Day izororo rakavambwa kupemberera rusununguko rwezvematongerwo enyika muSouth Africa uye sarudzo yekutanga isina rusaruraganda munhoroondo yeSouth Africa mushure mekubviswa kwehudzvanyiriri muna 1994.
Custom embroidery logo baba heti baba golf cap baba mutambo chivharo flat peak hat snapback hat baba chivharo